Ku Burji xiniinyaha - Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato caafimaadkaaga | Niman qurux badan
Alicia tomero | 08/11/2021 21:52 | Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon, Caafimaadka
Muuqaalka buro ku taal xiniinyaha Badanaa waa xaalad keeni karta nooc ka mid ah dhibaatada weyn oo ay tahay in la falanqeeyo. Ragga qaar baa fiirsada kooda muuqaal caadi ah ama sababtoo ah lamaanahaaga ayaa ogaaday.
Buro ku taal xiniinyaha macnaheedu maaha kansar, inkastoo ay tahay in la sameeyo daraasad qoto dheer booqashada dhakhtarka takhasuska leh, maadaama muuqaalkiisu aanu macnaheedu ahayn xanuun, ama dhiig-bax, ama wax la mid ah. Kordhinta mugga aaggan ayaa laga yaabaa inay noqoto muuqaalka muuqaalka oo aan lahayn wax badan, laakiin waa in si faahfaahsan loo falanqeeyo.
1 Sidee loo baadhayaa xiniinyaha?
2 Sideed ku ogaan kartaa in kuusku uu yahay kansar?
Sidee loo baadhayaa xiniinyaha?
Haddii aad rabto iskaan samee, marna aad daah uma aha in la saadaaliyo in la ogaan karo. Taabashadani waxay ina xasuusin doontaa sahaminta ay haweenku ku sameeyaan naasahooda, halkaas oo ay lagama maarmaan noqon doonto in la taabto gacmaha si loo ogaado joogitaanka nooc ka mid ah isbeddellada yaryar, qanjidhada ama cabbirrada aan habboonayn.
Mararka qaarkood dib u eegista noocan ah ayaa la gaaraa sababtoo ah nooc ka mid ah Xanuunka caloosha hoose, gumaarka, xiniinyaha ama xiniinyaha. Calaamadda digniinta waxay noqon doontaa marka la arko buro yar oo xiniinyaha ah iyo in nigisyadu aad u adag yihiin oo yar yihiin.
Rag badan, xitaa haddii aysan waxba dareemin, kaliya waxay rabaan inay noqdaan hubin joogto ah si loo ilaaliyo in wax walba ay wanaagsan yihiin. Xaniinyo kasta si gaar ah ayaa loo xiiri doonaa, hal gacan ayaa xiniinyaha lagu qabanayaa, gacanta kalena waa lagama maarmaan in samee iskaanka Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay lagama maarmaan tahay in la bixiyo calaamadda digniinta marka kor u kaca mugga uu ka soo baxo xiniinyaha, ama dareen culus oo aan waxyeello lahayn, habkan waa in uu ka soo qayb galo takhasusle.
Waqtiga ugu fiican ee baaritaanka waa marka waxaad ku jirtaa qubeys ama qubeys, sidaan oo kale maqaarka xiniinyaha wuxuu noqon doonaa mid aad u dabacsan. Sidaan horeyba u eegnay, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in xiniinyaha midkood dhinac loo raro oo dhinaca kale laga eego haddii ay jiraan nooc ka mid ah joogitaanka sida. buro ama barar. Waa inaad hubisaa xitaa haddii aad isku le'eg tahay inta u dhaxaysa hal xiniinyaha iyo mid kale, iyo haddii ay sidoo kale leeyihiin dherer ama laalitaan isku mid ah.
Suulka waa in la rogaa oo xiniinyaha si tartiib ah loo dhaqaajiyaa si loo ogaado cillad kasta ama haddii ay qandho soo baxdo. Waa in palpate epididymis, oo ka mid ah meelaha lagu dhaqo shahwada. Waxay ku taallaa xagga sare iyo dhabarka xiniinyaha kasta oo waxay u qaabaysan tahay sida tuubada. Waa lagama maarmaan in la raadiyo in aan la helin nooc ka mid ah cilladaha.
Meel kale oo lagu koolkoolinayo waxay noqon doontaa "Kormeeraha kala duwan", nooc kale oo ah tuubo dhuuban oo dheer oo ka soo baxda epididymis oo yeelan doonta qaab siman. U fiirso in aanu jirin nooc buro ama buro ah. Marka dhinac ka mid ah la sahamiyo, waxaa loo baahan doonaa in lagu celiyo aagga kale.
Sideed ku ogaan kartaa in kuusku uu yahay kansar?
Inta badan, buro ku taal xiniinyaha maaha kansar. Waxay u muuqan kartaa garaac weyn, halkaas oo dareere ku ururay hareeraha, ama si fudud uga yimi cyst. Takhtar takhasus leh ayaa sameyn doona baaritaan iyo sahan weyn.
Waxaa la go'aamin karaa in uu kansar kugu dhaco haddii arrimo khatar ahi jiraan ama aad leedahay nooc ka mid ah taariikhda qoyska, habkan dabagalka ayaa aad loo qiimeeyaa. Haddii uu kansar noqdo, waxaa la ogaan karaa inuu sidoo kale leeyahay noocyadan calaamadaha:
Muuqashada buro aan caadi ahayn, leh muuqaal ama muuqaal aan dhicin.
Dolores ama xanaaq badan oo ku jira dib, gaar ahaan caloosha hoose iyo xoogaa xanuunka xiniinyaha.
Dareenka ama xanuunka naasaha. Mararka qaarkood waxaa soo baxa burooyin.
Dhakhtarku waa inuu sameeyaa a qiimaynta calaamadahan oo dhan oo bilow in aad ku darto baadhisyo badan oo lagu ogaanayo ogaanshaha go'aansan. Ultrasound Waxay noqon doontaa mid ka mid ah baaritaannada, halkaas oo aad ku qiimeyn karto haddii uu jiro kansarka xiniinyaha. Tijaabooyinku waxa kale oo loo samayn doonaa sida a sawir qaade la xisaabiyay (CT) ama sawir-qaadista magnetic resonance imaging (MRI) si loo ogaado inuu qabo iyo haddii uu faafay. Baaritaanka dhiigga ayaa sidoo kale go'aamin doona xoogaa macluumaad dheeraad ah.
Inta badan la-talinta caafimaadka carruur badan ama dhallinyaro badan ayaa horeba ula yimid dhibaatadan. Qaar badan oo ka mid ah kiisaskan waxay la soo baxaan buro aad u weyn oo ay u muuqato inay leeyihiin xiniinyo kale, laakiin tani waa inaan loo qaadan wax naxdin leh.
Kahor wax shaki ah ama calaamado aan habboonayn waa inaad u tagtaa dhakhtarka qiimayn weyn iyo goor hore. Waa inaad wax badan siisaa muhiimada wiilasha yar yar Marka ay helaan kuuskan, sida xaaladaha intooda badan ma aha calaamad wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Ku buro xiniinyaha